Okpomoku nke uwa gha eme ka ndi America mekwuo ozo | Network Meteorology
Okpomoku nke uwa gha eme ka ndi America megharia ahu
Mgbe ha gwara gị na ọnọdụ okpomọkụ ụwa dum na-abawanye nakwa na mmiri ozuzo na-ebelata n'ọtụtụ akụkụ ụwa, ọ dịịrị gị mfe iche na ọ gaghị erite uru ọ bụla maka ụmụ mmadụ. Ma ee, ọ dị.
Site na nyocha Nick Obradovich bipụtara na akwụkwọ akụkọ 'Nature Human Behavior', okpomoku zuru uwa ga - eduga ndi America ka ha mekwuo ihe.
Ka oge oyi na-ajụ oyi, ndị mmadụ na-achọ ịpụ apụ ma na-emega ahụ. Ka ọ na-erule ngwụsị nke narị afọ, ndị bi n'obodo ndị dị ka North Dakota, Minnesota, na Maine nwere ike irite uru dị ukwuu. Dị ka ya si kwuo ọmụmụ, ha nwere ike ime ka arụ ọrụ ahụ ha dịkwuo elu site na 2,5%.
Mana ọ dị nwute na ndị bi na ndịda, ọkachasị n'akụkụ ọzara, nwere ike iwepụtakwu oge n'ụlọ ebe ọ bụ na ọnọdụ okpomọkụ dị n'èzí enweghị ike ịnagide. Arizona, ndịda Nevada na ndịda ọwụwa anyanwụ California nwere ike ịnwe oke mbibi ọrụ na njedebe nke narị afọ.
Iji mezuo nkwubi okwu a, Obradovich nyochara nyocha gọọmentị metụtara omume omume, ozi ihu igwe kwa ụbọchị site na mgbe a gbara ajụjụ ọnụ, yana nyocha nke ọnọdụ ihu igwe n'ọdịnihu. N'ihi ya, ọ ghọtara nke ahụ Mgbe temometa na-agụ 28 degrees Celsius ma ọ bụ karịa, ndị mmadụ n'ozuzu ha nwere obere ọchịchọ ịpụ.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ ezie na nke a bụ obere uru maka ụfọdụ obodo, eziokwu bụ na okpomoku zuru ụwa ọnụ bụ ihe iyi egwu karịa uruDị ka Dr. Howard Frumkin, prọfesọ na-akụzi gburugburu ebe obibi na Mahadum Washington, si kwuo. Ọbịbịa nke ụmụ ahụhụ na-ekpo ọkụ na mpaghara ọkụ nwere ike itinye ndụ ọtụtụ mmadụ n'ihe egwu, ọ bụghị naanị na America, kama n'akụkụ ụwa niile nwere ihu igwe dị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Okpomoku nke uwa gha eme ka ndi America megharia ahu
Ngwa igwe na ọrụ ha
Kedu ebe kachasị ebili mmiri n'ụwa?